Andriano ireo marary leretsy • AoRaha
Miarahaba antsika mpamaky tompoko. Ny fahitana ny madilana hotetenina tao amin’ny sampana vonjy aina amin’ny hopitalim-panjakana iray lehibe eto an-drenivohitra no anton’izao anoratana eto amin’ity gazetintsika ity izao.
Ekena fa manao ny ezaka rehetra manampy sy mandray ireo marary ara-dalàna ary manambitamby ireo tsy salama ireo dokotera sy mpiara-miasa aminy maro. Isaorana manokana ireo mpitsabo na mpitsabo mpanampy (mpianatra asa, tompon-toerana) amin’izay fanetren-tena ataon’izy ireo izay. Irariana tompoko dia hitohy sy hihatsara hatrany ary tsy hitaky tambiny velively amin’ireo manana havana marary ny fanasoavana vahoaka ataonareo araka ny fianianana nataonareo izay.
Misy ihany anefa ireo mpiasa sasany amin’ny hopitaly no maningana, tahaka ireo mpivarotra ao amin’ny farmasia na fivarotam-panafody, izay somary kizintina manoloana ireo manan-kavana marary sasany; ao koa ny fahatafidiran’ireo mpangalatra any anaty faritry ny hopitaly. Ao koa ireo mpanadio sasany izay miseho azy ho mpitsabo alohan’ny dokotera, ka sahy mikitakita an’ireo mpiambina na mpanaraka marary. Ankoatra izay, ny tena lehibe sy ilàna vahaolana haingana dia ny tsy fahampian’ny fandriana sy seza handraisana ireo marary mila famonjena haingana tao amin’ilay hopitaly lehibe. Misy ireo marary mila vonjy maika tonga amin’ny sasak’alina no voatery mitsangana sy mipetraka amin’ny seza fotsiny anefa tokony hampakana aina sy hampialana sasatra matory eny ambony fandriana. Ireo fandriana amin’izany efa feno tsy salama. Ireo mpanaraka marary mihoroho noho ny aretin’ny havany dia voatery mitangorona sy mitakoko eny an-tokotany sy amin’ny toerana takotantakona mba mafampana miandry ny iraka hividy fanafody hanary tavimandry amin’iny alina iny.
Nahoana, ohatra, io trano lehibe konka sy mipetraka fotsiny ao Befelatanana io no tsy arenina mba hatao fandraisana ireo marary mila fitsaboana maika sy ireo mpiambina marary. Teny atsipy ho anareo tompon’andraikitra manampanahy ihany tompoko ireo, fa ny marary anie tsy sitrana raha tsy andrianina e!
Rakotomisetra Jean Louis
Tontolon’ny fampianarana :: Aorian’ny adina ara-panjakana vao fantatra ny valin’ny CEPE katolika